Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya oo Ammaanay hanaanka loo daryeelo Maxaabiista xabsiga Soomaaliyeed – Walaal24 Newss
Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya oo Ammaanay hanaanka loo daryeelo Maxaabiista xabsiga Soomaaliyeed
April 22, 2018	Off	By walaal24
Dowladda Turkiga ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay hannaanka loo Daryeello Maxabiista Xabsiga dhexe ee Xamar kaddib markii Danjiraha dowladdaas u fadhiya Soomaaliya uu booqday Xabsiga.
Taliyaha ciidammada Asluubta Soomaaliyeed oo uu wehliyey Safiirka dowladda walaalaha ee Turkiga u qaabilsan Soomaaliya ayaa booqday Xabsiga dhexe ee Xamar oo ay ku jiraan Maxaabiis kala duwan, laba masuul ayaana booqday Warshadaha Farsamada Gacanta ee Xirladda loogu abuuray Maxaabiista Soomaaliyeed ee halkaas ku xiran.
Meelaha sida gaar ah loo soo indha-indheeyey waxaa ka mid Warshadaha soo saarta Qalabka Xafiisyada, Dharka iyo IWM.
Taliyaha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed S/guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa u mahadceliyey Danjiraha dowladda Turkiga, sida ay mar walba kaalin mug leh uga qaataan taageerada Soomaaliya ee dhinac walba.
Safiirka Tukriga u fadhiya Soomaaliya Olgen Beker ayaa ammaanay sida hufnaanta leh ee loo dhiirogeliyo Maxaabiista, loona dhiso maskaxdooda, waxa uu sheegay in ay garab taagan yihiin dowladda Soomaaliyeed, arrimaha Xabsiyada iyo Caddaaladdana ay ka taageerayaan.
Gabogabadii Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Danjire Olgen Beker ayaa la guddoonsiyey Haddiyad sharafeed uu ugu talogalay taliyaha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed, waxaana goob-joog ka ahaa taliye ku xigeenka ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Jeneraal C/kariim Cali Afrax.
Barcelona ayaa ku guuleysatay Copa del Rey Andres Iniesta oo ku soo biiray Gool dhalinta
Dhageyso: Cumar C/rashiid “Labadii sano ee aan Ra’iisal wasaraha ahaa wax heshiis ah oo aan la galnay Imaaaraadka ma jirin’’
Dalka Kenya shir wadahadal uga furmay Dowlada Itoobiya iyo Jabhada ONLF
Maamulka Jubaland oo shaacisay liiska Odayaasha soo xuli doona xubnaha Xildhibaanada
Wafdi ka socda Wasaaradda Gaashaandhiga Dalka Masar oo soo gaaray Magaalada muqdisho
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Danjiraha Masar oo ka wada hadlay mataaneynta Muqdisho iyo Qaahira
Madaxweyne Muuse Biixi oo joojiyay dhismo ka socday Hargeysa Club
Dhageyso: Roobabka Gu’ga oo ka da’ay degaanada maamul Goboleedka Puntland sababay……………..
Dhageyso: Gudomiyaha Gobolka ahna Duqa Muqdisho oo daahfuray Ololaha Taakulo ee bisha Ramadaan
Dhageyso: Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo dhagax-dhigay Xarunta Dabdamiska Degmada Wadajir
Dhageyso: Arin mucjiso oo lagu arkay Gobolka Baay ee maamulka Koonfur Galbeed
Dhageyso: Guddiga joogtada ee Golaha Aqalka sare oo baaq nabadeed uga diray colaada ka taagan Maxaas iyo Kaxandhaale
Daawo: Madaxweyne Muuse Biixi oo ka hadlaya horumarka Somaliland isbadalka ka jira Geesks Afrika hambalyana u diray Madaxweynaha cusub ee DDSI
Daawo: Cabdikariim Qalbi dhagax oo soo booqdey labada aqal baarlamaan iyo Guurtida ee Somaliland kana codsaday in Soomaliya wax la xaliyaan
Daawo: Xildhibaan Maxamed Adan Macalin Waxaan Cadeynaynaa in Warbxiinta Golaha loo qaybiyey ay tahay mid baalmarsan…
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay rabashadihii ka dhacay magaalada Muqdisho
Daawo: Ciidanka Booliska oo sameeyey howlgal lagu soo qabtay kooxo Burcad ah Degmoyinka Dharkeynley iyo Kaxda inta u dhaxeysa